Ma cunida cananaaska iyo faaidada ay leedahay | Ragga Stylish
Kadib markaan kahadlay cuntada perricone iyo "mucjisooyinkeeda" miisaan lumis, waxaan maanta kuu keenaynaa cunada cananaaska. Waa hab u adeegta in si dhakhso leh loo daadsho kilo xoogaa daqiiqado gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waa cunno aad u xaddidan oo aan kuu oggolaanayn inaad cunto badan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ayaa ah inay kaa caawinayso inaad xakameyso waxa aad u badan tahay, laakiin waxay leedahay faa'iido darro caafimaad oo kale oo waaweyn.
Qodobkaan waxaan ku sameyneynaa falanqeyn ballaaran oo ku saabsan cuntada cananaaska. Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato heerka ay wax ku ool leedahay oo aad iska nadiifiso shakigaaga ku saabsan.
2 Waa maxay cuntada cananaaska
3 Guryaha cananaaska
Cunto cananaaska waxaa loo tixgeliyaa nooc ka mid ah monodiet. Taasi waa, cunno cunno xad-dhaaf ah oo xaddidan. Fikradda ayaa ah inaad dhaqso u lumin karto xoogaa rodol ah munaasabad gaar ah oo u eg mid caato ah. Sida iska cad, miisaanka aad lumineyso ayaa u badan dheecaanno la hayo.
Luminta dufanka ayaa ah hab gaabis ah oo qaali ah. Waxay u baahan tahay qaybinta wanaagsan ee nafaqooyinka jirka, yaraanta kalooriga oo aan aad loo cadeyn, dhaqdhaqaaqa jirka oo kordhay (oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqa wadnaha) iyo jimicsiga muhiimka ah ee miisaanka (haddii kale waxaan lumineynaa culeyska qaab muruqa ah).
Si aad u lumiso miisaanka qaabka dareeraha, kaliya si aad ah u yareeya qaadashada karbohaydraytka oo ku dar waxyaalaha lagu durayo ee dabiiciga ah. Dureytiyowyadan waxay leeyihiin waxqabad ku saabsan ciribtirka dareeraha iyagoo maraya dariiqyo kala duwan (inta badan kaadi). Sababtoo ah waa cunno xaddidan marka loo eego cuntada, ma ogola in hormoonku soo bandhigo qaddar badan oo nafaqooyin lagama maarmaan ah. Sidan oo kale, waxaan ku helnaa cunto taas Laguguma talin inaad sii waddo wax ka badan 5 ama 6 maalmood adigoon saameyn xun ku yeelan caafimaadka.
In kasta oo monodiets-ka si weyn loo dhaleeceeyay, haddana mararka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa dhacdo aan caadi ahayn. Ka soo qaad inaad aroos aado oo aadan waqti u helin inaad miisaankaaga dhinto, waxaad la kulmi kartaa dhowr kiilo oo kaa lumay si ay surwaalku ula qabsadaan. Muuqaal kale ayaa ah inaad u egtahay mid dhuuban.
Si kastaba ha noqotee, cunnooyin kasta oo baabi'iya cuntooyinka bixiya nafaqooyinka (iyo in ka badan haddii ay yihiin cuntooyin dhab ah), uma fiicnaan karaan caafimaadkaaga.
Waa maxay cuntada cananaaska
Cunnooyinka cananaaska ayaan lahayn wax khatar caafimaad ah inta aynaan dhibaatooyin hore lahayn ama aan u isticmaalno kaliya dhowr maalmood. Muddada lagu taliyay waa in la ilaaliyaa wakhti kasta oo aan la dhaafi karin.
Waxaa jira noocyo kaladuwan oo cuntadan ah, laakiin salka ayaa gaar u ah cananaaska. Abuuraha cuntadan, Joann Metzger, wuxuu lumiyay 20 kiilo 6 toddobaad gudahood. Caafimaad ahaan, tan laguma talinayo. 20ka kiilo, wuxuu jiiday murqaha iyo cabitaanno badan. Waxa aan runtii dooneyno inaan lumino waa dufan, tanina ma ahan wax sahlan ama deg deg ah inaan luminno.
Runtii ma u maleyneysaa in haddii ay fududaan laheyd in dufanka lumo, qof walba uusan lahaan laheyn jir dhiska? Xaqiiqdu waa wax kale oo gebi ahaanba ah.
Waxa cunnooyinka cananaaska ay ka kooban yihiin waa cunista gebi ahaanba cananaaska cusub maalinta ugu horeysa. Waa inaad wax ka cuntaa qaybo maalintii oo dhan oo aad cabtaa biyo badan.ku. Kaloriinta yar ee cananaaska ku jirta oo ay weheliso saamaynta duradu waxay kuu sababi doontaa inaad dhaliso yaraansho kalooriya oo aad u badan isla markaana aad lumiso cabitaanno badan oo harsan. Si kastaba ha noqotee, sida ugu dhakhsaha badan ee aad wax caadi ah u cuntid mar labaad, waxaad ku soo ceshan doontaa kiilada iyadoo la adeegsanayo dib-u-soo-celin caan ah oo caan ah. Tani waa sababta oo ah waxa kaa lumay ma ahan dufan oo cabitaannada ayaa la soo kabsaday isla marka aan cunno karbohaydraytyada markale.
Cananaaska waxa ku yar kalooriyada oo uu ku badan yahay biyaha. Saamaynta durayaa ee ay weheliso waxyaalaha ay ka kooban tahay fiber-ka badan ayaa ka dhigaysa inay saameyn weyn ku yeeshaan miisaanka oo yaraada. Cunnadan ayaa kaa caawin karta haddii jirkaagu ku haysto biyo dheeraad ah. Kala-baxa joogtada ah, dheef-shiidka liita ama cellulite si weyn ayaa loo yareyn karaa iyadoo la cunayo cananaaska.
Cananaaska waa in la cunaa mid cusub oo bisil. Waxba ha ku qaadan sharoobada ama qaab kale. Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaashid si cusub oo la jarjaray si dhammaan fiitamiinnada si fiican loogu xafido. Haddii si dhexdhexaad ah loo cuno, cananaaska waa cunto aad u fiican. 100 kiilo ee cunto ah, cananaaska wuxuu leeyahay 50 kcal oo 10 gr ay sonkor yihiin. Sonkortaani waxay ka kooban tahay fructose. Waa kuwan sifooyinka cananaaska 100 garaam:
Kalooriyeyaasha 50,76 kcal.
Dufan 0,40 g.
Sodium 2,10 mg
Karbohaydraytyada 10,40 g.
Fibre 1,90 g.
Soo jeedin 10,40 g.
Borotiin 0,44 g.
Vitamin B3 0,39 mg
In la sameeyo cuntada cananaaska waa muhiim inaadan isticmaalin wax ka badan 5 maalmood oo xiriir ah. Haddii kale, cuntadani waxay saameyn taban ku yeelan kartaa caafimaadka iyo jirka. Xusuusnow in tani ay tahay cunto inta badan la isticmaalo marka aad rabto inaad si dhaqso leh u lumiso dhowr kiilo si aad si fiican ugu ekaato ama dharkaasi si fiican kugu habboon. Dhacdooyinkaani waxay noqon karaan aroos, baabtiis, casho muhiim ah, iwm.
Waa inaad maanka ku haysaa in ku dhowaad isla dhacdooyinka aad ku raaxeysaneyso, aad dib u soo ceshan doontid kiilo aad lumisay, maadaama aad keliya lumisay cabitaanno, dufan lahayn.
Ku raaci suxuun cananaaska leh ugu yaraan xoogaa caato ah oo aan dufan lahayn. Ha ahaato turkey, tuna ama digaag. Waa inaadan cunin jiiska da'da ah, aalkolo ama cabitaannada tamarta. Shaahu sidoo kale waa saaxiib fiican oo lumiya dareerayaasha iyo cabbista biyo fara badan si aysan u fuuqbaxin.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isticmaasho ugu yaraan laba qaado oo saliid saytuun ah maalintii, adoo xadidaya isticmaalka milixda iyo xawaashka, iyo inaad sameyso xoogaa jimicsi ah.
Cunnadan waxaa samayn kara qof kasta oo caafimaad qaba oo aan qabin colitis ama macaan noocuu doono ha noqdee. Waxaan rajaynayaa in talooyinkaan aad ku lumin karto kuwaa kale ee dheeriga ah dhacdadaas oo aadan ku seegi karin oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Cunto cananaaska